सत्तामोहले फुटको संघारमा जसपा ?? | eKhabarSanjal
Home राजनीति सत्तामोहले फुटको संघारमा जसपा ??
सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विकल्प खोज्ने विषयलाई लिएर जसपा विभाजित बनेको हो। यो विषयलाई लिएर जसपामा दुई धार देखिँदै आएको छ।
काठमाडौं : सत्तामोहका कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटको संघारमा पुगेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विकल्प खोज्ने विषयलाई लिएर जसपा विभाजित बनेको हो। यो विषयलाई लिएर जसपामा दुई धार देखिँदै आएको छ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको पक्षमा देखिएको छ भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोे पक्ष ओली सरकारलाई समर्थन गरेर जाने पक्षमा देखिएको छ।
लामो समयसम्म अनिर्णित रहँदै आएको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
जसपाका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार वैशाख १४ मा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समर्थन गरेका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘लामो समयसम्म अनिर्णित रहेको सरकारको विकल्पको पक्षमा निर्णय भएको छ। वैशाख १४ मा बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा र प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने ४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो,’ ती कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘यस बिषयलाई लिएर उहाँहरू (महन्थ ठाकुर पक्ष) असन्तुष्ट हुनुभएको छ।’
ती सदस्यले बहुमतको निर्णय भएकाले पार्टीको निर्णयविरुद्ध जाने छुट कसैलाई नहुने बताए।
यसअघि जसपाका नेताहरूबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा विवाद देखिएको थियो। अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
वैशाख १४ मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा महन्थ पक्षले असहमति राख्दै आएको छ।
लुम्बिनी ह्विप उल्लंघनको अर्थ
दुई धारमा विभाजित जसपाको विवादको लुम्बिनी प्रदेशमा स्पष्ट देखियो। अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले गरेको ह्विप उल्लंघन गर्दै जसपाका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता जोगाउन साथ दिए। मुख्यमन्त्रीको समर्थन गरेपछि उनीहरू मन्त्रीसमेत बने।
सुरुमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर गरेका सन्तोष पाण्डे, सुमन रायमाझी, विजय यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल अहिले प्रदेश मन्त्री बनेका छन्।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ह्विप उल्लंघन गरेका सांसदलाई पार्टीको सदस्य र सांसद्को रूपमा नरहने गरी कारबाही गरिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गरायो। सांसदलाई कारबाही गरेपछि महन्थ ठाकुर पक्ष असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ।
ठाकुर पक्षले सांसद् सचिवालयलाई पार्टीबाट कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको भन्दै अर्को पत्र पठाएको थियो। एकअर्काको निर्णय मान्न तयार नहुँदा लुम्बिनीबाट जसपाभित्रको विवाद आधिकारिकरूपमा छताछुल्ल हुन पुगेको थियो।
महन्थ पक्ष जसरी पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रदेशमा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बचाउन लागिपरेको थियो।
महन्थ पक्षीय एक नेता पार्टी फुटको आधिकारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्। ‘लुम्बिनीको घटनाले त्यही सन्देश दिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टी दुई भागमा विभाजित भइसकेको छ। औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ।’
महन्थ पक्षले देखेको विश्वासको आधार
जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार महन्थ ठाकुर पक्ष जसरी पनि ओली सरकारलाई समर्थन गरेर जाने पक्षमा छ। यसले सरकारले पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा लगाइएका १५ मुद्दाका १ सय २० नेता–कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ताको निर्णयले नै विश्वासको आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ सहितका नेताहरूसँग लामो छलफलपछि जसपा नेता–कार्यकर्तामाथि मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।
सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णयपछि राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरूले ओली सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यसलाई सरकारको चालबाजी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
बाबुुराम–उपेन्द्र पक्ष संसद् विघटनपछि संवैधानिक आधार गुमाएको भन्दै ओली सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्न नहुने पक्षमा छ।
संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध सडकमा देखिएको जसपाको महन्थ पक्ष ओली सरकारसँग नजिकिएर बार्गेनिङको बाटो रोजेको थियो भने उपेन्द्र पक्ष कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकारको विकल्पको पक्षमा उभिएको थियो।
‘जसपा दुई टुक्रै हुन्छ’
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सत्ताका विषयलाई लिएर जसपा फुटको अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। दुई पार्टी मिलेर बनेको जसपा एक हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ। ‘महन्थ ठाकुरले एउटा कुरा बोलेको छ, उही समयमा उपेन्द्रको अर्को भ्वाइस छ। एकै पाटीको दुई भ्वाइस तत्काल देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
उनी सत्ताको प्रलोभनकै कारण जसपा दुई टुक्रा हुने विश्लेषण गर्छन्। ‘फुट्छ नै। पार्टीमा महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्नो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा पनि ओलीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने बोलिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने।
विश्लेषक श्रेष्ठ जसपाले संबिधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउने गरे पनि सिद्धान्तका हिसावले विचलित भएको निष्कर्ष निकाल्छन्।
‘संविधान संसोधन एक्लैले गर्न मिल्दैन,रेशम चौधरी छाड्न मिल्दैन भनिसकिएको छ। तर,पनि पार्टीकै एउटा पक्ष मुल मुद्दा छाडेर ओलीलाई हरहालत सहयोग गर्ने पक्षमा छ। अर्को पक्ष ओली सरकारको विपक्षमा,’ उनी भन्छन्, ‘सिद्धान्तको लडाइँको हिसावले उपेन्द्र यादव पक्ष अगाडि देखिन्छ। महन्थ पक्षमा त्यो देखिँदैन।’
सरकारको विकल्पमा जसपा निर्णायक
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र ओली सरकारको विकल्पका लागि तयार छन्। तर, यसका लागि दुई विकल्प मात्र देखिन्छन्। कि त जसपाले समर्थन गर्नुपर्छ कि त माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा यसको सम्भावना छ। नेपाल पक्षले तत्काल यसबारे निर्णय लिने देखिँदैन। यस अवस्थामा जसपाको सानो समूहले एमालेलाई समर्थन गरेको अवस्थामा ओली सरकारको विकल्पको सम्भावना रहँदैन।
उपेन्द्र यादव पक्षले अविश्वास प्रस्तावमाथि समर्थनको निर्णय गरे पनि ठोसरूपमा यसबारे छलफल अगाडि बढाएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारको विकल्पबारे जसपासँग छलफल भइरहेको भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन्। ‘हाम्रो मात्र गणितले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन। यसमा जसपाको भूमिका निर्णायक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘छलफल निरन्तर छ। निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन।’
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गणेश शाह जसपाकै निर्णयका कारण सरकारको विकल्प खोज्नमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘कांगेस अविश्वास प्रस्ताव लैजान तयार छ। हामी समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्न तयार छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जसपाले निर्णय दिन सकेन। माधव नेपालजीहरूले पनि निर्णय लिन सक्नुभएन।
जसपा फुटको संघारमा पुगेको अवस्थामा सरकारको विषय पनि लम्बिने विश्लेषकको आँकलन छ।
Previous articleएक्काइस वर्षपछि भेटिइन् हेरोइनको अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर गोपी
Next articleक्रियटिभ ग्रुप, पो.वि.वि को कमिटी बिस्तार